Tababare Thomas Tuchel oo ku farxay bandhiggii Kai Havertz ee kulankii ay guusha ka gaareen Everton – Gool FM
Xulka qaranka Netherlands oo u gudbay wareega 16-ka ee koobka EURO 2020 kaddib markii uu garaacay Austria…+SAWIRRO
“Way ku adkaan doontaa Eriksen inuu ku soo laabto garoomada kaddib Euro 2020” – Halyeey kooxda Liverpool ah
Florentino Perez: “Ma’ahan maalin sahlan, Ramos marwalba Real Madrid waxay noqon doontaa Gurigaaga”
Sergio Ramos oo ilinta ceshan kari waayey kolkii uu ku jiray Shirkii jaraa’id ee uu ku macsalaamaynayey Real Madrid
Waa tee Kooxda haatan hoggaanka u haysa tartanka loogu jiro saxiixa Sergio Ramos?
Tababare Thomas Tuchel oo ku farxay bandhiggii Kai Havertz ee kulankii ay guusha ka gaareen Everton
Haaruun March 9, 2021
(London) 09 Maarso 2021. Tababaraha Kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa farxad ka muujiyey bandhiggii Kai Havertz uu sameeyey kulankii ay xalay guusha ka gaareen Everton ee horyaalka Premier League.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa si weyn u ammaanay Kai Havertz kaddib markii uu xiddiga reer Germany u soo jeestay isla markaana uu qeybta ugu badan ku lahaa ciyaartii xalay ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Everton.
Havertz ayaa saxiixiisa lagu qarash-gareeyey lacago badan oo uu ugu soo dhaqaaqay kooxda ka dhisan horyaalka Premier League bilowgii xilli ciyaareedkan, isagoo sanadihii ugu dambeeyay wacdaro ka dhigay kooxda Bayer Leverkusen iyo horyaalka Bundesliga.
Si kastaba ha noqotee, kaddib bilow adag oo uu ku bilaabay xirfaddiisa garoonka Stamford Bridge, 21-sano jirkaan ayay ku adkaatay inuu wacdaro dhigo bilihii la soo dhaafay, iyadoo ay jirtay saameynta Korona Fayras.
Havertz ayaa ku lug lahaa labadii gool ee ay xalay ku adkaatay Chelsea, kuwaasoo u sahlay inay salka dhigtaan afarta sare ee horyaalka Premier League, maxaa yeelay shuut uu tuuray Everton ayaa iska dhaliyey, halka rigoorada dambena isaga lagu galay.
Tababare Tuchel ayaana Havertz ku ammaanay dadaalkiisa waxaana uu yiri: “Aad baan ugu farraxsanahay bandhiggiisa.
Isagoo ku guda jiray shirkiisa jaraa’id ee kulanka kaddib Macallinkii hore ee kooxda Paris Saint-Germain ayaa warbaahinta u sheegay: “Wax shaki ah lama gelin karo tayadiisa, tayadiisa iyo dabeecaddiisa.
“Wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado horyaalka Premier League iyo kooxda qaabka ay u ciyaareyso si aan u guuleysanno kulan kasta, isla markaana oo aan u helno heerka ugu sarreeya.”
Horudhac: Juventus vs FC Porto & Borussia Dortmund vs Sevilla... (Waxyaabaha aad uga baahan tahay kulammada caawa laga ciyaari doono 16-ka Champions League
Thierry Henry oo ku riyoonaya inuu dib ugu laabto Camp Nou si uu Tababare ugu noqdo Kooxda Barcelona... (Muxuuse ka yiri Arsenal?)